မြန်မာများ ခေါ်ဆိုသော “ရခိုင်” လူမျိုး | ဌေးလွင်ဦး | ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးစု အသံ
မြန်မာများ ခေါ်ဆိုသော “ရခိုင်” လူမျိုး | ဌေးလွင်ဦး
ယနေ့ ရခိုင်ပြည်နယ်ဟု ခေါ်တွင်သော အရပ်မှ ဗမာစကားပြော လူမျိုးအား ဗမာများက ရခိုင်လူမျိုးဟု ခေါ်ဆို သည်။ စကိုင်းထူပါရုံ မုခ်ဝ ကျောက်စာ အရ- ပန်းဆက် ရသည့် တော သား ကျေးကျွန်မျိုး (ကျေးကျွန် ဆိုသည် မှာ ပဒေသရာဇ်မင်းများ လက်ထက်၌ ၀န်ထမ်း ကိုခေါ်ခြင်းဖြစ်သည်) ဟု မှတ်တမ်းတွေ့ရသည်။ သို့သော် ထို မတိုင်မှီကပင် ရခိုင်ဒေသသို့ ယခု ရခိုင် လူမျိုးဟု ခံယူထားသူများ ရောက်ရှိသည့် အထောက်အထားများ ရှိနေ သည်။ ၎င်းတို့အား ရခိုင်ဒေသရှိ မူလဘူတ လူမျိုးတို့က ရက္ခု ဟုခေါ်တွင်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တင်ပြသည့် ရခိုင် သမိုင်း (၂) တွင် ဖေါ်ပြပြီး ဖြစ်သည်။
ဗမာဟု မည်တွင်လာမည့် လူမျိုးသည် ပျူလူမျိုးကို အခြေခံလျှက် မြန်မာနိုင်ငံရှိ တိုင်းရင်း သားပေါင်း စုံမှ ရော ပြွန်း၍ ကပြား ဖြစ်သွားသော လူမျိုးကြီး တစ်ခုသာ ဖြစ်သည်။ ထို ဗမာဟု မခံယူမှီ (အေဒီ ၁၁ ရာစု မတိုင်မှီ) ကတည်းက သိရိခေတ္တရာ ပျူနိုင်ငံမှ သွန်းလုပ်ခဲ့သည့် ဒင်္ဂါး များနှင့် အေဒီ ၇ ရာစုမှ ရခိုင် ရှေးဟောင်းဒင်္ဂါးတို့မှာ တူညီနေကြောင်းကို တွေ့ရသည်။ သို့ဖြစ်၍ မြန်မာအင်ပါယာဟု မဖြစ်တည်မှီကတည်းကပင် ဗမာ ဖြစ်လာမည့် ပျူလူမင်းများမှ မူလဘူတ ရခိုင်နိုင်ငံငယ်သို့ လွှမ်းမိုးခဲ့ဟန် ရှိခဲ့သည်။ သို့သော် ၎င်းသည်ပင် မူလဘူတ ရခိုင် သမိုင်းထက် နှစ်ပေါင်း ၂၀၀၀- မှ ၂၅၀၀ ခန့် နောက်ကျနေပေသည်။
ဗမာများထက် ရှေးကျစွာ နေပြည်တော်ထူထောင်ခဲ့သော မွန်လူမျိုးတို့အား ဗမာများ မှ အောင်နိုင် လျှက် မြန်မာ ပြည်အောက်ပိုင်း မွန်ဒေသများအား မြန်မာမှုပြုခဲ့သော်လည်း မူလမွန်လူမျိုး တို့မှာ အနည်းနှင့် အများ တည်ရှိ နေသကဲ့သို့- ယခု ရခိုင်နယ်ဟု ခေါ်တွင်နေသည့် ဒေသသို့ ယက္ခ (ရက္ခ) ခေါ် ရှေးဟောင်း ဗမာလူမျိုးများ ၀င် ရောက်လာခဲ့သော်လည်း ရှေးဟောင်းမူလဘူတ လူမျိုးတို့မှာ အပြီးတိုင်တိမ်ကော ပပျောက်သွားခြင်း မဟုတ် ပေ။ အချို့မှာ ကပြားများ ဖြစ်လျှက် အသားမဲ၊ နှာတံသွယ်၊ မျက်ခုံးကောင်းသည့် (မြန်မာများအမြင် ကုလား ဆင်) ရခိုင်အမည်ခံ လူဦးရေမှာလည်း မြောက်များစွာ ဖြစ်လာသကဲ့သို့- မူလဘူတ လူမျိုးများမှာလည်း တည်ရှိ နေမြဲသာ ဖြစ်ပေသည်။
ထိုအရပ်ဒေသမှ ဒေသခံများသည် မိမိတို့၏ နိုင်ငံတော်အား သမိုင်းစဉ်ဆက် ရခိုင်နိုင်ငံတော် ဟု ခေါ်တွင်ခဲ့ သည့် အထောက်အထားကို မတွေ့ရပေ။ မြန်မာများ၌ ပုဂံခေတ်၊ ပင်းယခေတ်၊ အင်းဝခေတ်- စသည်ဖြင့် ရှိပြီး ပုဂံမင်းဆက်၊ ပင်းယမင်းဆက်၊ အင်းဝမင်းဆက်၊ ညောင်ရမ်းမင်းဆက်၊ ကုန်းဘောင်မင်းဆက် များ အဖြစ်ဖြင့် သာခံယူသကဲ့သို့- ဓည၀တီ၊ ဝေသာလီ၊ လေးမြို့၊ မြောက်ဦးမင်းဆက်များ အုပ်ချုပ်ခဲ့ ရာ ဒေ သဖြစ်လျှက်- ၎င်း ဒေသကို မြန်မာများက ရခိုင်နယ်ဟု ခေါ်တွင်ခဲ့သည်။ သို့သော် နောက်ဆုံးသော ရခိုင်မင်းဆက်များကမူ အာရ်ကန်နိုင်ငံဟုသာ သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ သို့ဖြစ်၍- ရခိုင်မင်းဆက်ထံမှ အာဏာ သိမ်းယူလိုက်သော ဗြိတိသျှ အင်ပါယာမှ ထိုဒေသအား အာရ်ကန် Arakan ဟုသာ ဆက်လက် မှတ်တမ်း တင်ခဲ့ခြင်း၊ ခေါ်ဆိုခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ၁၉၉၀ ပြည့် ရွေးကောက်ပွဲဝင်သည့် ရခိုင်မျိုးချစ်ပါတီအားလုံးမှလည်း မိမိတို့၏ ပါတီများအား Arakan အမည် နာမဖြင့် မှတ်ပုံတင်ခဲ့ကြသည်၊ ခံယူခဲ့ကြပေ သည်။ မြန်မာနိုင်ငံ ၏ မြေပုံ၌လည်း ၁၉၉၆ မတိုင်မှီထိ ထိုဒေသအား Arakan ဟု သာဖေါ်ပြခဲ့သည်။ သို့သော် ယခုအခါသော် ကား Rakhine ဟု ဖြစ်ခဲ့ရချေပြီ။ နောင် နှစ်ပေါင်း ၅၀ ၌ Arakan အမည် ပျောက်ဆုံးသွားတော့ မည်မှလည်း သေချာနေပေသည်။ သို့သော် လက်ရှိထိ Arakan League for Democracy (ALD). Arakan Liberation Party (ALP) စသည်တို့က Arakan ဟူသော အမည်ပေါ်၌ သက်သေခံ ရပ်တည်လျှက် ရှိနေသေးပေသည်။
သို့ဖြစ်လျှင်- ယနေ့အခါ၌- မြန်မာတစ်ပြည်လုံးနှင့် ပြည်ပရောက် မြန်မာနိုင်ငံသား အပေါင်းမှ လူမျိုးတစ်မျိုး အား Arakan ဟု အသိအမှတ်ပြု ခေါ်ဆိုနေသူများမှာ မည်သူများ ဖြစ်ပါသနည်း- ရိုးသားစွာ ဆင်ခြင်စေ လိုသည်။ မည်သည့် ရခိုင်တစ်ဦးကိုမျှ Arakan ဟု မခေါ်ဆိုပါ။ “ရိုဟင်ဂျာ”များကိုသာ Arakan အာရ်ကန် ဟုခေါ်ကြောင်း တွေ့ရမည် ဖြစ်သည်။ Arakan အား ရှေးဟောင်းဗမာ (ရခိုင်) လူမျိုးမင်းဆက်များက သိမ်းပိုက်အုပ်ချုပ်နိုင်ခဲ့ ခြင်းကြောင့် မြန်မာများက ရခိုင်များ အုပ်ချုပ်ရာနယ်-ဟု သတ်မှတ်သော်လည်း- မူရင်း Arakan မှာ ရှေးဟောင်း ဗမာလူမျိုး မဟုတ်ကြောင်း ထိန်ဝှက်ဖုံးကွယ်၍ မရနိုင်သေးပေ။
ထို့ပြင်- ရှေးဟောင်း မြန်မာသမိုင်းမှတ်တမ်းများတွင် “ရိုဟင်ဂျာ”ဟူသည့် အမည်နာမအား မှည့်တွင် ထားခြင်း မရှိသည်ခြင်းဟူသည့် အကြောင်းပြချက်မှာ လူမျိုးတစ်မျိုးအား လက်ရှိ မြန်မာဧရိယာအတွင်းမှ ပယ်ဖျက်ပစ်ရန် လုံလောက်သော အကြောင်း မဟုတ်ပေ။ မြန်မာမင်းအဆက်ဆက် သည် မြန်မာနိုင်ငံ အတွင်းရှိ လူမျိုးအားလုံး၏ အမည်နာမများ၊ သမိုင်းနောက်ခံများ၊ ဘာသာစကားများအား စနစ်တကျ သုတေသနလုပ်၍ မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ ခြင်းလည်း မရှိပေ။ Arakan နိုင်ငံတော်အား ရခိုင် ဟုသာ ခြုံငုံခေါ် ဆိုခဲ့၍- ထိုရခိုင်အား သိမ်းပိုက်စဉ်- မဟာ မြတ်မုနိဆင်းတုတော်ကြီးအား ပင့်ဆောင်သွားခဲ့ရာ၌ ဘု ရားစောင့် လူမျိုး ဟု ခေါ်သွားသူများမှာလည်း “ရိုဟင် ဂျာ” စကားပြော လူမျိုး ဗုဒ္ဓဘာသာ များဝင်များ သာ ဖြစ်ပေသည်။ ထိုလူမျိုးအကြွင်းအကျန်များ ယနေ့ထိတိုင် ရှိ နေသေးပေသည်။ ရခိုင်မှ စစ်သုံ့ပန်း အဖြစ် ခေါ်ဆောင်သွားပြီး ဗမာတပ်မတော်၌ စစ်သည်များ အဖြစ်ခန့်အပ် သော သူများမှာလည်း- မွတ်ဆ လင်များပင် ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့အား ကမန်များ ဖြစ်သည်ဟု တစ်ထစ်ချပြောဆို ၍ မရနိုင်ပေ၊ ကမန် များ ဖြစ် လျှင် ကမန် ဟုသာ အမည်တွင်စေရမည် ဖြစ်သည်။ ရခိုင်နယ်မှ မွတ်ဆလင်များ သာ ဖြစ်သည်ဟူသည့် အချက်မှာ သေချာသော အချက် ဖြစ်နေပေသည်။ ထိုစစ်သည်တို့အတွက် ၀တ်ပြု ကျောင်းဆောင် များ ဆောက်လုပ်ပေးခဲ့ခြင်းကြောင့်- ယနေ့တိုင်ထိ၊ ရန်ကုန်၊ မော်လမြိုင် မြို့များ၌ ရခိုင်ဗလီ ဟူ သော အမည်နာမများဖြင့် တည်ရှိနေခြင်းများသာ ဖြစ်ပေသည်။ ထိုဗလီများမှာ အင်္ဂလိပ် အုပ်ချုပ်မှသာ အင်္ဂလိပ် ခေတ်၌ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသို့ ရခိုင်မွတ်ဆလင်များ ထိုးဖေါက် ၀င်ရောက်လာ၍ တည်ဆောက် ခဲ့ခြင်း များ မဟုတ်ဘဲ ဗမာဘုရင်များ လက်ထက်မှပင် ဗမာစစ်တပ်မှ စစ်သည်တော်များ အတွက် တည်ဆောက် ပေးခဲ့ ခြင်းများ ဖြစ်ပေသည်။
ထိုသို့ ဗမာဘုရင်များ လက်ထက်ကပင် မြန်မာများ ခေါ်ဆိုခဲ့သော “ရခိုင်” ဟူသည်မှာ- ရခိုင် နယ်ရှိ လူမျိုးစုံ ဘာသာစုံ အား ခေါ်ခဲ့သော အမည်နာမဖြစ်၍- ယခု အခါတွင်မှ ရှေးဟောင်းဗမာစကားပြော ဗုဒ္ဓ ဘာသာဝင် များကသာ မူပိုင်ဆွဲလိုက်ခြင်းမှာ မတရားမှု တစ်ခုအား ကျူးလွန်လိုက်ခြင်း သာ ဖြစ်တော့ သည်။ ထို့ ထက်မက “ရိုဟင်ဂျာ”စကားအား တစ်လုံးတစ်ပါဒမျှ မတတ်၊ အသိဘဲလျှက် ဘိုးစဉ်ဘောင် ဆက်က ပင် ဗမာ စကား သို့မဟုတ် ရှေးဟောင်းဗမာ (ရခိုင်)စကားကိုသာ ပြောဆိုသည့် လူမျိုးများထဲမှ မွတ်ဆလင်များကိုလည်း ရခိုင်မှန်လျှင် အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် မရှိဟု အကြောင်းပြချက်ဖြင့် လူမျိုးအ မည်ဖျောက်ခံရခြင်း သို့မဟုတ် နိုင်ငံ ခြားသား အဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းတို့မှာလည်း မတရားမှု သာ ဖြစ်တော့ သည်။
(ဤသမိုင်းကြောင်းများအား ဖေါ်ပြခြင်းမှာ သမိုင်းမှန်အား သမိုင်းသဘောတ ရားဖြင့် လေ့လာနိုင်ရန် သာ ဖြစ်၍ ခွဲထွက်ရေးမူတို့အား အားပေးခြင်း လုံးဝ မဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်သည် မတရားမှုတို့အား လုံးဝ လက်မခံသော်လည်း ခွဲထွက်ရေးမှုဟူသည် တိုင်းပြည်အတွက် အကျိုးမရှိ၊ လူထုအတွက် အကျိုးမရှိ၊ အနာဂါတ် မျိုးဆက်အတွက် အကျိုး မရှိဟုသာ ခံယူထားသူ ဖြစ်သည်။)
This entry was posted on December 30, 2012, in နိုင်ငံရေး. Bookmark the permalink.	Leaveacomment
UNFC တိုင်းရင်းသားများ ကောင်စီက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ထောက်ခံ ကြေညာ →